आइसोलेशनबाट हास्य कलाकार हरिवंशको यस्ते अपिल, बिलगेट्सको नोटमा नेपाली महिला कसरी परिन् ? हेर्नुहोस असोज २९ गतेका मुख्य समाचारहरु – Complete Nepali News Portal
आइसोलेशनबाट हास्य कलाकार हरिवंशको यस्ते अपिल, बिलगेट्सको नोटमा नेपाली महिला कसरी परिन् ? हेर्नुहोस असोज २९ गतेका मुख्य समाचारहरु
यसैबीच अर्बपति बिल गेट्सको ब्लग गेट्स नोटले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) मा चर्चामा नआएका ‘सेभेन हिरोज’मा एक नेपाली पनि परेकी छिन् । गेट्सको उक्त ब्लगमा महामारीको समयमा अविश्वसनीयरुपमा काम गर्ने ७ व्यक्तिको वर्णन गरिएको छ । गेट्सको यो सूचीमा मेरी स्टोप्स नेपालकी सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता लक्ष्मी रायमाझी पनि परेकी हुन् । हेर्नुहोस असोज २९ गतेका मुख्य समाचारहरु :